DOWNLOAD Facetime N'ihi na Mac
Face Time bụ ihe ịtụnanya ngwa kere Apple Inc. Nke a video telephony ngwaahịa ka ridiculously mere ka ọ dịkwuo mfe ina ejikọrọ na ndị ọzọ site na-eme video ma ọ bụ ọdịyo oku. Nke a ịrịba Face Time ngwa webatara na niile ngwaọrụ na-akwado IOS nakwa na Macintosh kọmputa na Mac OS X 10.6.6 na mgbe e mesịrị.
FaceTime maka mac free download
FaceTime ngwa maka mac
free FaceTime maka mac
download FaceTime maka mac free
FaceTime maka mac os x
FaceTime free download maka mac
free FaceTime download maka mac
Nke a na-eji ngwa ahụ na mbụ maka iPhone 4 ọrụ ma ugbu a ruru ya ngwa ngwa na-ewu ewu, ọ na-aghọ a wuru na-atụmatụ niile Apple ngwaọrụ tinyere iPhones, iPad, Mac, na iPod aka. Nkwurịta okwu bụ ihe akụkụ nke taa ndụ na ugbu a ị nwere ike conveniently iji Face Time gị mac ịnọgide na aka azụmahịa gị na ndụ.
Gị Mac, ị dị nnọọ mkpa gị njikọ Ịntanetị ma ọ bụ cellular data na mgbe ị nwere ike mfe ịgwa kọntaktị gị na nanị otu click. Nke a asọmpi ngwa nke Face Time mewo ka o kwe ịgwa ezinụlọ ma ọ bụ enyi mgbe ị na-na a na njem, nwere ike na-akpọ gị ọrụ, nwere ike inye n'ihu, ịgwa gị ahịa na ndepụta na-aga.
Ọ bụ kacha, okike, doro anya, kensinammuo na-adaba adaba n'ụzọ ime video ma ọ bụ ọdịyo oku na-anọgide jikọtara kọntaktsị na ụwa nke Apple ngwaọrụ. Isiokwu a ga-enyere gị aka ịghọta ihe ndị bụ isi na nbudata atụmatụ, ojiji na ndị ọzọ mmiri nke Face oge gị Mac.
1 Download Face Oge maka Mac OS:
2 Nzọụkwụ Iji Wụnye Face Oge Site Mac Apple ụlọ ahịa:
2.1 Ịrịba Ama Components maka Face Time on Mac:
3 Olee otú iji melite FaceTime on Mac:
3.1 Face Time ngosi & Atụmatụ On Mac:
3.2 Ngosi ntọala Face Oge:
Download Face Oge maka Mac OS:
Maka iji Face Time gị Mac, ọ bụ naanị a okwu nke ole na ole clicks. Face Time bụ ihe inbuilt ngwa gị mac. All ọhụrụ nsụgharị nke Mac ama tupu-arụnyere Face Oge.
All ị ga-eme bụ nanị tinye gị iPhone nọmba na Apple email ID na ndị pụrụ inweta otu n'ime ndị kasị elu-edu video telephony ngwaọrụ gị mac. Ị nwere ike mfe ịgbakwunye na kọntaktị nke ndị ọrụ ndị ọzọ na-eji Apple ngwaọrụ tinyere Mac, iPhones, Emmanuel, iPod, etc. Ị nwere ike iji gị Apple NJ email dị ka gị bere ID ịkpọtụrụ ndị ọrụ ndị ọzọ na ụwa nke Apple.
Ọ bụrụ na ị na-adịghị na-Mee Face oge ngwa gị mac, ị pụrụ nanị na ibudata ya site na ịga na Mac App Store. Maka iji Mac App Store, ị ga-enwe dịkarịa ala Mac OS X 10.6 ma ọ bụ elu. Ị nwere ike ma na-Mac App Store na gị na desktọọpụ ma ọ bụ i nwere ike ịhụ na ọ na tupu arụnyere App Store.
Nzọụkwụ Iji Wụnye Face Oge Site Mac Apple ụlọ ahịa:
Chọpụta Face oge APp site na-ede Face oge na search mmanya nke na-Mee Mac Apple ụlọ ahịa ma ọ bụ na pịa EBE A.
Pịa na Buy button mere na i nwere ike ịzụta Face Time ngwa n'ihi na gị Mac.
Tinye Apple ID maka ịzụta a software
The na-eri nke wụnye Face Time ngwa bụ naanị n'ihi na $0.99
Ọ dị mkpa ịghọta, na Face Time ị ga-wụnye si Mac App Store bụ okenye version. The ọhụrụ version of Face Time dị na Mac OS X 10.6 ma ọ bụ elu. Ọ na-atụ aro ka download Face Oge naanị ma ọ bụrụ na ị na-eji ihe okenye mbipute nke Mac.
Ozugbo ị arụnyere ma ọ bụ na-Face Time software gị Mac, ị pụrụ ime ka na-akparaghị ókè videos ma ọ bụ ọdịyo oku ndị ọzọ niile site na iji Apple ngwaọrụ.
Ịrịba Ama Components maka Face Time on Mac:
Ma ị ga-enwe Mac na Mac OS ma ọ bụ i nwere Mac OS X 10.6 ma ọ bụ elu.
All kọntaktị na ị chọrọ iji n'ihi na video ma ọ bụ ọdịyo oku ga nwere Apple m Devices ma ọ bụ ha ga-eji Mac.
na-akpali mmasị, i nwere ike na-enweta Face Time audio gị Mac na ọrụ site na iji Apple Watch.
Jide n'aka na-nwere a kwesịrị ekwesị ma na ngwa ngwa njikọ Ịntanetị nke mere na ị pụrụ ịnụ ụtọ full quality video ma ọ bụ ọdịyo oku enweghị interruptions.
Ị ga-eme ka gị na Apple ID malite iji ngwa a.
Olee otú iji melite FaceTime on Mac:
Ị mkpa na-eso niile n'okpuru iji amalite ejikọta site Face Time na ndị ọrụ ndị ọzọ.
Firstly, ẹkedori gị Face Time software na gị Mac. I nwere ike ime nke a site na ma na-eji tupu arụnyere software on Mac ma ọ bụ site na wụnye Face Time si Mac App Store
Tinye gị ugbu a Apple ID na ọ bụrụ na ị na-adịghị gị ID, ị nwere ike ike otu.
mezue nkwenye usoro
I nwere ike ịchọpụta ozi gị site ma na-njikọ gị adreesị ozi ịntanetị ma ọ bụ i nwere ike inwe a nkwenye koodu gị nọmba ekwentị.
Mgbe nkwenye usoro, ị ga-emerịrị ya tinye nọmba ekwentị na email NJ nke ndị ọzọ na kọntaktị na-amalite na-eme ka gị na mbụ Face Oge oku na-aga.
The software ga-ajụ gị mmasị ka ọdịyo ma ọ bụ vidiyo na-aga. Ị nwere ike ịhọrọ ihe ọ bụla ị chọrọ ka ejikọrọ na ndị ọrụ ndị ọzọ.
Tinye ozi nke ndị ọrụ ndị ọzọ gụnyere e-mail address, aha ma ọ bụ nọmba ekwentị. I nwere ike ime ya site na itinye ihe ọmụma a na search mmanya.
ma lezie, enweta na ekwentị ma ọ bụ na igwefoto na-eme ka a quality oku na-enweghị atụ ngwa nke Face Oge.
Face Time ngosi & Atụmatụ On Mac:
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka jikọọ ọzọ Apple ọrụ ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-na-a oku na-aga na ghara ịchọta gị m Ekwentị ma ọ bụ m Kedo akwa, mgbe ahụ ị nwere ike ngwa ngwa na-eji gị Mac ịga oku.
Ọzọkwa, ma ọ bụrụ na ị na-na n'etiti gị oku na chọrọ ịgbanwe ọ bụla ọnọdụ mgbe ị na-akpali gị òké na pịa ọ bụla nke nhọrọ
I nwere ike ogbi Maị ma ọ bụ unmute ya
Ị nwere ike atụgharị video ma gbanyụọ dabere na mmasị gị
I nwere ike resize gị meziri na-ekiri ndị ghọtakwuo
Ị nwere ike kwụsị gị oku mgbe ọ bụla ị chọrọ
Adịghị ama ama, ị chọrọ ịgbanwe ihe ọ bụla ọnọdụ nke Face Time gị Mac, i nwere ike conveniently ime nke a site na ịga na Apple menu ahụ na-aga ka usoro mmasị ahụ na-aga ka Ịma Ọkwa. A window ga-emeghe ka n'okpuru:
Ngosi ntọala Face Oge:
Ị nwere ike mfe ịgbanwuo ma ọ bụ gbanyụọ ọ bụla mma na ị na-amasị. Ị nwere ike ịgbanwe ụda Ịma Ọkwa, ngwa akara ngosi, ngosi mmelite na ọtụtụ ndị ọzọ
Ọzọ na-adọrọ mmasị mma bụ, ị pụrụ ime ka otu na-akpọ site na otu Face oge ọdịyo ma ọ bụ video oku. ruo 32 kọntaktị ga-eji na otu oku. Nke a bụ nnọọ aka maka ọrụ, nzukọ, na ụdị. Nke a AIDS ha jikọọ ọrụ na ndị ahịa si n'ụwa nile na nanị otu click.
Isiokwu a emeela ihe ọmụma zuru ezu iji melite na-eji ihu oge on mac. M na-atụ isiokwu kemgbe ihe ọmụma n'ihi na ị na ị nwetara bara uru data site na nke a mpempe. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, do share it in the comment box below and share with your friends and family.
Download FaceTime maka Windows
FaceTime IHE iPad
Skype n'ihi na android
DOWNLOAD FaceTime IHE PC
Facetime Download - site downloadfacetime